GlobalNet | Store Data and Server on GlobalNet local Cloud During Crisis
Store Data and Server on GlobalNet local Cloud During Crisis
Crisis ကာလများအတွက် အရေးကြီး Data များ၊ Server များ၊ Data Center များကို GlobalNet-Local Cloud မှာ လုံခြုံစွာဖြင့် အမြန်ဆုံး သိမ်းဆည်းလိုက်ကြပါစို့
လူကြီးမင်းတို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အရေးအပါဆုံးဖြစ်သည့် Data Center များကို Investment cost သက်သာစွာဖြင့် Virtual Data Center တစ်ခုကို အလျှင်မြန်ဆုံး တည်ဆောက်လို ပါသလား ?
အရေးကြီး Data များ ပြောင်းရွေ့နိုင်ရန် နှင့် Information and File server များကို လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်း ထားနိုင်ရန်အတွက် အသင့်တော်ဆုံး Virtual Cloud Storage တစ်ခုဖန်တီးလိုပါသလား ?Server အသစ်များကို အမြန်တိုးချဲ့တည်ဆောက်ဖို့အတွက် လူကြီးမင်းတို့၏ Data Center ရှိ Server များ မလုံ လောက်ဖြစ်နေပါသလား?
အရေးကြီးတဲ့ Business Applications များအတွက် High Performance ရရှိစေလိုပါသလား?Physical Data Center (သို့မဟုတ်) Data Recovery Site တစ်ခု ကို စျေးနှုန်းသက်သာစွာနဲ့ အချိန်တိုအတွင်း အမြန်တည်ဆောက်ဖို့ အရေးကြီးလိုအပ်နေပါသလား၊Crisis ကာလများတွင်လည်း မိမိတို့၏ အဖိုးတန် Data များကို ရေကြီးမီးလောင်ခြင်း အန္တရာယ်များမှ ကာကွယ်နိုင်စေရန် Data Backup ပြုလုပ်ထားလိုပါသလား ?
ဒီလိုအခက်အခဲများအတွက် GlobalNet (Global Technology Company) သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ VMware Official Partner အဖြစ် VMware Cloud Verified Technology နည်းပညာ များဖြင့် Tier3Level Data Center တွင် Servers များထားရှိပြီး Local Cloud Services များဖြစ်သည့်
အစရှိသည့် Local Cloud ဝန်ဆောင်မှုများကို VMware Professional များမှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေး နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
လူကြီးမင်းတို့၏ အရေးကြီး Data များ ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ Digitalize ဖြစ်စေရန် ၊ သိမ်းဆည်းမှု အပိုင်းတွင် Secure , Scalable and Flexible ဖြစ်စေရန် အတွက် GlobalNet Cloud Certified Engineer များမှ Infrastructure, Architecture များကို အသေးစိတ်လက်ခံရေးဆွဲပြီး လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်များကို support ပေးနေ ပြီဖြစ် ပါတယ်။
GlobalNet သည် VMware Cloud Verified Official Partner ဖြစ်သောကြောင့် Local Partner Supporting အနေဖြင့် FREE Advisory service, Local Cloud training, Knowledge sharing training အစရှိတဲ့ အခွင့်အရေးများကို ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
? Learn more: globalnet.com.mm/local-cloud/
? Contact Us : +959 883080874 , +959 883080849
? Contact Mail : digitalservices@globalnetmm.com, digitalsales@globalnetmm.com
Five Ways To Deliver...
Customer Service က လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် ...
Get FREE 60 Days...
Google Workspace ၏ Business ...